Nichalas Key oo arrimo nexdin leh ka sheegay Somalia iyo QM oo berri uu... - Caasimada Online
Home Warar Nichalas Key oo arrimo nexdin leh ka sheegay Somalia iyo QM oo...
Nichalas Key oo arrimo nexdin leh ka sheegay Somalia iyo QM oo berri uu…
Muqdisho (Caasimada Online) – Wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nichalas Key ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan Soomaaliya, isagoona arrimo naxdin leh sheegay.
Key ayaa berri lagu wadaa in uu qadka Vidio-ga kala hadlo QM, isagoo ku sugan Muqdisho, wuxuuna ka warbixin doonaa xaalada Soomaaliya iyo khilaafka madaxweynaha iyo xildhibaannada soo kala dhex galay.
Wuxuu u sheegay BBC-da in Soomaaliya ay mareyso xaalad khatar oo uu ka cabsi qabo in 2016-ka ay doorasho ka dhacdo dalka marka loo eego sidda ay wax u socdaan.
Wuxuu ammaanay horrumar laga gaaray dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha iyo dib u dhiska balse wuxui carabka ku adkeeyay in khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo xubno ka tirsan baarlamaanka isagoona yiri arrintaas waa dib u dhac hor leh.
Wuxuu sheegay baarlamaanka in ay doonayaan in ay meesha ka tuuraan madaxweynaha ama qeyb ka mid ah, taasna waxa ay markale dib noo xasuusineysaa 2013- oo khilaafka madaxda uu dhacay taasoo waqti badan uu ku lumay.
Wuxuu ka digay haddii khilaafka madaxweynaha iyo xildhibaannada baarlamaanka uu cirka isku shareero in ay taasi muujineyso dib u dhac ku yimaada howlaha laga rabo in ay dowladda qabato ka hor 2016-ka.